Nosamborina noho ny fanamarinana ny zava-misy: Nampandoavin’ny fitsarana Kazakh onitra ilay Okrainiana mpanao gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Septambra 2018 5:19 GMT
Aleksandr Gorokhovsky. Sary nalain'i Raul Uporov ho an'i Uralskaya Nedelya. Nahazoana alalana.
Nifarana tampoka ny atrikasa fanamarinana ny zava-misy amin'ny media tany Kazakhstan avaratra andrefana tamin'ny 15 Septambra rehefa niditra an-keriny sy nisambotra ny iray tamin'ireo mpitarika ny atrikasa, Aleksandr Gorokhovsky ny polisy
Ny mpikarakara ny atrikasa, Lukpan Akhmedyarov, no tonian'ny gazetim-paritra tsy miankina Uralskaya Nedelya, izay efa ela no lasibatry ny fanorisorenan'ny fanjakana.
Mpanao gazety be mpanaja sady mpanofana momba ny media avy ao Kyiv i Gorokhovsky, ary nasaina nandoa onitra teo amin'ny 110 dolara Amerikana teo rehefa nanameloka azy tamin'ny fanitsakitsahana ny lalàna mifehy ny fifindra-monina ao Kazakhstan ny fitsarana Kazakh. Nanambara ny mpampanoa lalàna fa rehefa niditra tao Kazakhstan i Gorokhovsky dia tsy nilaza izay nanasa azy tao amin'ny firenena tao amin'ny taratasiny momba ny fifindramonina.
Nilaza ireo mpitandro ny filaminana roa izay tonga teo amin'ilay sehatra fa namaly ny fitarainan'ny olom-pirenena iray izy ireo fa misy “Seminera momba an'i Okraina” tontosaina ao amin'ny hotely Chagala ao an-tanànan'i Uralsk.
Aleksandr Gorokhovsky miaraka amin'ny mpisolovavany ao amin'ny fitsarana tamin'ny 17 septambra. Mipetraka ao aoriana i Lukpan Akhmedyarov. Sary nalain'i Raul Uporov ho an'i Uralskaya Nedelya. Nahazoana alalana.
Lasa mpitarika iray amin'ny fanamarinana ny zava-misy amin'ny media i Okraina taorian'i Rosia nanafika sy nanakambana ny faritaniny tamin'i Krimea tamin'ny taona 2014. Narahana fampielezan-kevitra mafonja izay nanampy tamin'ny fanamarinana ny fihetsik'i Moskoa tamin'ny firenena ny fanafihana.
Nipoitra ireo fikambanana tahaka ny StopFake.org satria niasa mba handroaka ny onjan'ny lainga avy amin'ny fampahalalam-baovao Rosiana mba ho an'ny tombontsoan'ireo mpihaino ao anatiny sy ivelan'i Okraina ireo mpanao gazety Okrainiana. Ny tetikasa media manokan'i Gorokhovsky, Bez Brehni (anarana izay midika hoe Tsy misy Lainga), dia tranonkala iray hafa mitovy karazana izay miasa miaraka amin'ny International Fact Checking Network. Nanoratra boky momba ny fanamarinana ny zava-misy ihany koa izy.
Niteraky ahiahy ho azy ho an'ny manampahefana ao Uralsk, tanàna akaikin'ny sisintanin'i Kazakhstan miaraka amin'i Rosia ny fahatongavan'ireo Okrainiana mpanofana momba ny media. Miezaka misoroka izay fifanakalozan-kevitra momba an'i Okraina ny mpitarika ao amin'ny firenena, mitaratra ny fahatahorana lehibe ny amin'ny mety ho separatisa mpomba an'i Moskoa ao amin'ny faritrany manokana ao avaratra, izay matanjaka indrindra ny herin'i Rosia.
Saingy ny antony lehibe manosika ny fanafihan'ny mpitandro filaminana dia mety noho ny zava-misy fa i Akhmedyarov, tonian-dahatsoratra ao amin'ny gazety Uralskaya Nedelya no namorona ny sekolin'ny asa fanaovan-gazety ho an'ny tanora, gazety izay mitatitra tsy tapaka momba ny kolikoly ary mahatonga ny fahatezeran'ireo manampahefana ao amin'ny faritra nandritra ny taona maro .
“Heveriko fa fitambarana zavatra roa ireo”, hoy i Akhmedyarov tamin'ny Global Voices, niresaka momba ny fitsabahan'ny polisy sy ny fitazonana an'i Gorokhovsky. “Tena saro-pady tanteraka ny zava-drehetra izay eritreretin'ny governemanta fa mifandraika amin'ny Okrainina.”
Etsy andaniny, hoy izy, tapa-kevitra ny hanakana ny fivoaran'ny sekolin'ny asa fanaovan-gazetin'olon-tsotra vao napetraka tamin'ny herinandro lasa ny manampahefana.
“Rehefa niezaka nitady toerana hofaina ho an'ny sekoly izahay dia nolavina hatrany. Ny sasany tamin'ireo mpianatray aza nasaina tsy hanatrika ny fampianarana mihitsy. Avy eo dia nisy ny horirantava (profil) hosoka tamin'ny anarako tao amin'ny Facebook izay nilaza fa andoavam-bola ny fampianarana. Kanefa maimaim-poana tanteraka izany “, hoy izy nanampy.
Tsy zava-baovao ho an'i Uralskaya Nedelya, iray amin'ireo haino aman-jery tsy miankina vitsy tavela ao Kazakhstan ny fiverimberenan'ny sakana nofaritan'i Akhmedyarov. Tamin'ny taona 2012, raha ratsy dia ratsy ny fifandraisan'ny gazety tamin'ny manampahefana teo an-toerana, dia nisy vondron-dehilahy nanafika an'i Akhmedyarov izay nanatsatoka antsy azy imbetsaka sy nitifitra azy tamin'ny basy. Na dia voasazy higadra an-tranomazina aza ireo lehilahy efatra noho ny fanafihana, dia mbola tsy fantatra mihitsy izay tena atidoha lehiben'izy ireo.
“Mampidi-doza ny maha-namanao, Lukpan, nahazo onitra noho izany ianao,” hoy ny namana mpanao gazety iray tao amin'ny Facebook namazivazy taorian'ny fanamafisana ny sazin'i Gorokhovsky.
Nampiseho tsy firaharahiana goavana ny lalàna ao Uralsk ny fitsaràna an'i Gorokhovsky, izay saika niafara tamin'ny saika tantara ratsy avy hatrany.
Niseho ho vavolombelona i Talgat Katauov, ilay lehilahy nolazain'ny polisy fa niantso nampahafantatra azy ireo ny “seminera momba an'i Okraina”, ​​saingy nilaza ity lehilahy ity fa tsy nanao antso toy izany mihitsy. Niampanga ny polisy tamin'ny fampiasana ny anarany amin'ny zavatra diso i Talgat ary nandrahona ny hitory azy ireo noho ny hatezerana eo amin'ny Kazakh sy ny Rosiana.
Tao ambadiky ny efitranom-pitsarana, lehilahy iray nolazain'ilay mpanao gazety Uralskaya Nedelya fa tanora solontena avy amin'ny Kaomitin'ny Fiarovam-Pirenena ao Kazakhstan, mpandimby ny KGB tamin'ny vanim-potoana Sovietika no nanafina ny tarehiny tamin'ny mpaka sary.
Niteny tamin'ny Global Voices i Akhmedyarov fa nametraka “tantara mahatsiravina” tamin'ny fanomezana onitra mpampiofana ny manampahefana. “Ankehitriny, dia handinika tsara ireo fikambanana tsy miankina sy ireo fikambanana hafa any Kazakhstan mialoha ny hanasana ireo manam-pahaizana vahiny,” hoy izy.
Raha nilaza tamin'i Gorokhovsky i Akhmedyarov fa mikasa hiezaka hitazona ny sekolin'ny asa fanaovan-gazety ho an'ny tanora amin'ny herintaona, dia tsy nahafehy ny hehiny ilay mpanao gazety Okrainiana.